Xidigaha – Wararka Ciyaaraha Caalamka
Wararka Ciyaaraha Maanta September 10, 2020
Madaxda dowlad goboleedyada Koonfur galbeed, Hirshabelle iyo Galmudug ayaa galabta si wadajir ah uga soo degay garoonka dayuuradaha Muqdisho, iyagoo ka soo duulay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Saddexda Madaxweyne oo maanta shir wadatashi ah…
Horyaalka England, Horyaalka Spain August 27, 2020
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay iska iibiso Lionel Messi xagaagan hadii ay hesho dalab 200 milyan ginni ah. Kadib toddobaadyo la isla dhexmarayay, ayaa shaaca laga qaaday fiidnimadii Talaadada in weeraryahanka muddada dheer…
Horyaalka England, Wararka Ciyaaraha Maanta August 27, 2020
Chelsea oo xaqiijisay inay la soo wareegtay ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England Ben Chilwell
Kooxda Chelsea ayaa dhameystirtay saxiixa xiddiga heerka caalami ee dalka England Ben Chilwell oo ay kala soo wareegeen kooxda Leicester City . 23-sano jirkan ayaa qalinka ku duugay heshiis shan sano ah oo uu ku joogayo garoonka Stamford Bridge kaas…
Horyaalka England, Horyaalka Germalka, Wararka Ciyaaraha Maanta August 23, 2020
Arsenal Oo Kula Dagaalamaysa Liverpool Saxiixa Xidiga Thiago Alcantara
Kooxda Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay xiiseyneyso saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Bayern Munich Thiago Alcantara inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagaan. 29-sano jirkan ayaa qandaraaskiisa kooxda Allianz Arena waxa uu dhacayaa bisha June ee…
Horyaalka England, Wararka Ciyaaraha Maanta August 23, 2020
Kooxda Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay ku guuleysatay dagaalka loogu jiro daafaca kooxda Lille ee Gabriel Magalhaes , iyadoo ciyaaryahanka reer Brazil uu qarka u saaran yahay inuu u duulo London isbuuca soo socda si uu si rasmi…
Horyaalka England, Horyaalka Spain, Wararka Ciyaaraha Maanta August 23, 2020
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay weli wadahadalo kula jirto Real Madrid oo ku aadan mustaqbalka Dani Ceballos . 24 jirka ayaa xilli ciyaareedkii 2019-20 amaah ku qaatay Gunners, isagoo gacan ka geystay labo gool isla markaana labo caawiye…
Horyaalka Spain, Wararka Ciyaaraha Maanta August 22, 2020
Wakiilka Neymar oo sheegay in Lionel Messi uu ku biirayo Paris Saint-Germain
Neymar ayay u badan tahay inuusan ku laaban doonin Barcelona mustaqbalka dhow, waxaana jira fursado badan oo xiddiga reer Brazil markale uu ka garab ciyaaro Lionel Messi oo ku sugan Paris Saint-Germain , sida laga soo xigtay wakiilka weeraryahanka. 28 jirka ayaa…
Horyaalka England, Wararka Ciyaaraha Maanta August 22, 2020
Xidiga Thiago Silva Oo Doonaya Inuu Ku Biiro Chelsea Xagaagan.
Kabtanka Paris Saint-Germain Thiago Silva ayaa lagu soo waramayaa inuu doonayo inuu ku biiro kooxda Chelsea xagaagan. 35 jirka ayaa qarka u saaran inuu xor noqdo ka dib finalka Champions League, warbixin dhowaan soo baxday ayaa sheegeysa in kooxda Frank Lampard inay ka fiirsaneyso inay u…
Horyaalka England, Horyaalka Italy, Horyaalka Spain August 22, 2020
Arsenal ‘wali waxay hogaamineysaa loolanka loogu jiro Gabriel Magalhaes
Kooxda Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay wali ku horreyso tartanka loogu jiro daafaca dhexe ee kooxda Lille Gabriel Magalhaes inkasta oo kooxo badan lala xiriirinayo xilli dambe. Manchester United ayaa la sheegay inay wadahadalo la yeelatay wakiilka 22 jirkan wakiiladiisa oo…
Kooxaha Arsenal iyo Manchester United oo labaduba xiiso u qaba James Rodriguez
Arsenal iyo Manchester United ayaa labadoodaba lagu soo waramayaa in xiiseynayaan saxiixa Real Madrid weerarka James Rodriguez inta lagu guda jiro xagaagan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. 29-sano jirka ayaa si weyn loo filayaa inuu ka tago Bernabeu isbuucyada soo socda, isagoo…
Horyaalka England, Horyaalka Germalka August 19, 2020
Chelsea oo ku dhawaaqday Xiliga ay lasoo waregeyso Xidiga Kai Havertz
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay u sheegtay kooxda Bayer Leverkusen inay soo gabagabeyso heshiiska Kai Havertz marka la gaaro 28ka August. Blues ayaa loo qorsheeyay inay u dhaqaaqdo gooldhaliyaha aadka loo qiimeenayo in muddo ah, Havertz ka dib markii…
Horyaalka England, Horyaalka Germalka, Wararka Ciyaaraha Maanta August 19, 2020
Xidiga Jadon Sancho oo ku biiri kara Kooxda Manchester United
Jadon Sancho ayaa ku dhow inuu u dhaqaaqo Manchester United xagaagan marka la eego mushaharka xidigan. Red Devils ayaa weli lala xiriirinayaa 20 jirka, laakiin BVB ayaa ku adkeystay dhowr jeer tan iyo markii uu ku soo laabtay…
Horyaalka Germalka, Horyaalka Spain, Wararka Ciyaaraha Maanta August 15, 2020
Wargeysyada Yurub iyo waxyaabaha ay ka Qoreen Ceebtii Barcelona
Waxa xalay Portugal ka dhacay ceeb kadib markii ay Bayern Munich xasuuqday kooxda Barcelona kulan ka tirsanaa 8 dhamaadka champions League xilli ciyaareedkan. Kooxda Bayern Munich ayaa guuldaro 8/2 ah dhabarka u saartay kooxda Barcelona…
Horyaalka Spain, Wararka Ciyaaraha Maanta November 30, 2019
Kooxda Barcelona ayaa waxa ay way doontaa xidiga garabka ugu ciyaara ee Ousmane Dembélé, kulankii ugu danbeeyey ay la ciyaartay kooxda Dortmund. Dembele ayaa garoomada ka maqnaan doona ku dhawaad 10 asbuuc mana ahan mid…
Horyaalka England, Wararka Ciyaaraha Maanta November 26, 2019
Tababaraha Kooxda Man City ee Pep Guardiola ayaa xaqiijiyay mudada uu maqnaan doono xiddiga weerarka uga ciyaara kooxdiisa ee Sergio Aguero kadib dhaawacii ka soo gaadhay kulankii Chelsea. Xiddiga reer Argentine ayaa dhaawac uga baxay…
Horyaalka England, Wararka Ciyaaraha Maanta November 25, 2019
Xidigii hore kooxda Chelsea ee Eden Hazard ayaa sheegay ku biiristiisa Kooxda Real Madrid in oo ka danbeeyey Macalin Zidane ka danbyey ku biiristiisa Horyaalka Spain gaar ahaan Real. Hazard ayaa lala xariirinaayey sanadadii ugu…
Xidiga Garabka uga ciyaara kooxda Real Madrid ayaa shaaca ka qaaday in oo la jeclaan lahaay in Mohamed Saalah ku guuleysto laacibka Aduunka gacantane loo galiyo abaal marinta Bollan D,or. Waxaa oo sheegay in oo…
Kooxda Arsenal oo heshay bedelka macalin Emery.
Kooxda Arsenal ayaa xaalad xun soo wajahaday xili ciyaareedkaan kadib markii ay la kulantay guuldarooyin badan. Waxaa macalin u ah kooxda Arsenal macalin Emery oo shaqada ka bedelay macalin Arsen Winger, Taageerayaasha Arsenal ayaa aad…
Horyaalka England, Wararka Ciyaaraha Maanta July 7, 2019
Waxaa Magaalada Gaalkacyo lagu qabtay haweeney yaab leh oo in muddo ah iska dhigeysay inay tahay Nin taasoo u lebisan jirtay sidda ragga, iyadoo kiiskeeda baaritaan lagu bilaabay, laguna xiray saldhigga Booliska magaaladaasi. Taliyaha Booliska…
Horyaalka England, Horyaalka Italy, Wararka Ciyaaraha Maanta July 6, 2019
Askari la sheegay in uu katirsan yahay ciidanka dowlada Soomaaliya ayaa saakay magaalada Muqdisho gaar ahaan agagaarka Iskoolka Dhagax Tuur ee ku dhaw Igooska Dabka ku dilay Wiil bajaajle ahaa. Sida aan wararka ku helnay…